Ny Hipódromo de la Zarzuela sy ny tontolon'ny hazakazaka any Madrid | Soavaly Noti
Ny hazakazaka La Zarzuela sy ny tantarany
Jenny monge | | soavaly, Fifaninanana soavaly
Ny Hippodrome an'ny La Zarzuela dia miorina eo ivelan'ny tanànan'i Madrid. Miorina eo an-tendrombohitra amin'ny anarana mitovy "La Zarzuela" any akaikin'i El Pardo.
nisy vita ny trano tamin'ny 1941 amin'ny tany fananan'ny National Heritage taorian'ny fakana an-keriny ny Hippodrome teo aloha, La Castellana mba hananganana ny Nuevos Ministerios.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ity toerana ity ve ianao?
Alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ny tantaran'ny hazakazaka La Zarzuela dia hiverina hiverina isika taona vitsivitsy, rehefa napetraka tao Madrid ny hazakazaka soavaly ary nanjary nalaza. Saingy alohan'izay, ary mba hampiroboroboana ny filanao hanina, mamela anao horonantsary misy hazakazaka iray natao tao amin'ny Hipódromo de La Zarzuela izahay:
1 Ny fiandohan'ny hazakaza-tsoavaly any Madrid
2 Tantaran'ny hazakazaka La Zarzuela
Ny fiandohan'ny hazakaza-tsoavaly any Madrid
Talohan'ny nanokafan'ny Hipódromo de La Zarzuela ny varavarany, ny hazakaza-tsoavaly tao an-drenivohitra Espaniola dia nanana entana maherin'ny zato. Manangona an'io ny tantara ny hazakazaka soavaly voalohany dia natao tamin'ny 1835 ao amin'ny Alameda de Osuna. Fantatra ihany koa amin'ny hazakazaka hafa natao tao amin'ny Casa de Campo sy ny Paseo de las Delicias.
The Duke of Osuna, izay liana tamin'ny tontolon'ny Equine, tao Tamin'ny taona 1841, niaraka tamin'ny rahalahiny sy ny namany maromaro izy dia nanangana ny Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE) natao hampiroboroboana ity fanatanjahantena Equine any Madrid ity, hiarovana ny fifaninanana ary hampiroborobo ny fiompiana racehorses. Ny Duke of Osuna noho izany dia olona iray lehibe tao amin'io faritra io.
En 1845 dia nanomboka tamin'ny hazakazaka fifaninanana hazakazaka Casa de Campo vaovao fa mbola tsy misy fitsipika napetraka. Zavatra izay hanomboka hanamaivana ny taona 1867 miaraka amin'ny fankatoavana ny kaody fifaninanana frantsay ho maodely hifanaraka.
Notokanana tamin'ny 1878 ny La Castellana Racecourse, na dia tsy vita akory aza ny sanganasa rehetra. Amin'ny lalany, izay nisy tady 1400 metatra, Ny Grand Prix Madrid voalohany dia natao tamin'ny 1881. Ny fitsapana ny mari-pankasitrahana voalaza dia hametraka ny fototry ny Loka Lehibe Nasionaly sy ny fiadiana ny Tompon'ny Mpanjaka.
1883, Taona manan-danja ho an'ny tontolon'ny hazakazaka Madrid nanomboka teo ny Komisiona fisoratana anarana amin'ny soavaly Thoroughbred Horses dia natsangana.
En 1919 dia notokanana ny hazakazaka Aranjuez ao anatin'ny tokotanin'ny Royal House. Hisy fifaninanana hatao any. Ny Grand Prix Madrid dia notanterahina teto tamin'ny 1933 satria tamin'io taona io ihany dia tapitra ny fampiasana ny La Castellana Racecourse.
Ny sasany amin'ireo Ny soavaly manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao dia: Colindres, Nouvel An ary Atlántida. Misy lehibe jockey toa an'i Victoriano Jimenez sy Carlos Diez, handresy ihany koa izy ireo ao amin'ny Hippodrome ao La Zarzuela aorian'ny fijanonan'ny ady an-trano.
Tantaran'ny hazakazaka La Zarzuela
Amin'ny fahavaratry ny Tamin'ny 1934 dia nankatoavina ny fananganana ny La Zarzuela Racecourse. Ny fifaninanana natao hisafidianana ny tetikasa dia azon'ny ekipa mpanao mari-trano avy amin'ny injeniera Torroja sy ireo arisitra Arniches sy Domínguez, izay notaomin'ny San Hiro Hippodrome San Siro tany Milan.
Nanomboka ny asa ny taona manaraka. Nijaly ny asa a fijanonana noho ny Ady An-trano Espaniola ary noho izany antony izany dia nahemotra hatramin'ny 1941 rehefa notokanana ny hazakazaka.
Ao amin'ny taona voalohany amin'ny hazakaza-tsoavaly maro no nohafarana vahiny hanamaivana ny izay nananan'izy ireo very nandritra ny ady.
Folo taona taty aoriana, ny Hippodrome La Zarzuela no ivon'ny fiainam-piarahamonina Madrid. Nanomboka tamin'ny tapaky ny taona XNUMX dia nirongatra ny asa aman-draharaha.
ny 60 taona no taonan'ny fanambinana amin'ny toekarena Espaniôla, ary izany dia hita taratra amin'ny hazakazaka mandalo hatrany fanatsarana sy fanavaozana amin'ny làlana. Vita ny infirmary sy ny fotodrafitrasa ho an'ny jockey. Eo koa ny fananganana jeneraly vaovao.
Misy fiantraikany amin'ny hazakazaka ihany koa ny toekarena, ny filokana, ny loka. Tamin'ny 1968, ny Grand Prix Madrid dia nizara pesetas iray tapitrisa loka voalohany.
ny Ny taona 90 dia fotoanan'ny krizy ho an'ny Hippodrome. Tamin'ny taona 1996 dia nakatony ny varavarany mba hanaovana fanavaozana ireo toerana ilaina ao aminy. Hatramin'ny 2003 dia mitazona vanim-potoana iray an'ny hazakazaka feno hetsika isan-taona
Amin'ny oktobra Ny taona 2009, ny zafikelin'ny La Zarzuela Pacecourse dia nambara ho fananana tombotsoan'ny kolontsaina (BIC), misy sokajy tsangambato.
Ny Hippodrome, noforonin'ny mpanao maritrano Carlos Arniches, Martín Dominguez ary ny injeniera Eduardo Torroja, dia noheverina ho iray amin'ny sangan'asan'ny maritrano Madrid tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Fandrosoana lehibe io tamin'ny fomba fijery ara-drafitra sy ara-materialy. Ankehitriny dia mitahiry ny firafiny izy io satria noforonina ary nahazo fitsidihana maro avy amin'ireo manampahaizana manerantany manerantany liana amin'ny fandalinana azy.
Ankoatr'izany, amin'ny Nahazo ny Loka Voalohany amin'ny Kolejin'ny Arkitekto ao Madrid ho an'ny tetik'asa Famerenana amin'ny laoniny sy fanarenana nataon'i studio Junquera Arquitectos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ny hazakazaka La Zarzuela sy ny tantarany
Ny Skytianina sy ny fiompiana soavaly